Somaliland: Wasiir Xisbiyaddii Ku Eedeeyay in ay Bulshada kala saarayaan. |
Somaliland: Wasiir Xisbiyaddii Ku Eedeeyay in ay Bulshada kala saarayaan.
Hargeisa(GNN):-Wasiirka wasaaradda xannaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga mudane, Siciid Sulub Maxamed, ayaa ku eedeeyeey xisbiyada Somaliland inay yihiin kuwa dadkii u kala saaray Qabaa’il oo qofkii murrashaxnimo doonaya, ku xidhaya inuu soo kaxayso odayaasha reerkiisa.
Siciid Sulub oo ka hadlayey munaasibad lagu qabtay Magaalada Burco, ayaa sido kale muujiyey in aanu ku qanacsayn saddexda Xisbi ee ka jira Somaliland, isaga oo soo jeediyey in la furo Xisbiyada, waxaanu yidhi. “Xisbiyadii ayaa imika wadaa in ay dadkii qabaa’il u kala saarto, waxaynu ku jirnaa in qofka murrashaxa la yidhaahdo reerkiinnii soo kaxayso, odayaashaadii iyo cuqaashaadii meeday.
Waxa aynu ku bilownay qofka taageerayaashiisa inaynu waydiino, tusaale ahaan halkan Burco xafiiskii u horreeyay ee laga furay kii xisbiga UDUB ayuu ahaa, doorashadii ugu horraysay waxaa aanu ku xidhnay keen boqol iyo konton qof oo taageerayaal ku ah, oo qaadhaanka bixiya, oo isku dhex jira.
Waxaa ina dilay Distoorkii iyo Shuruucdii aynu samaysanay kuma dhaqano, axsaabtii qaybkii aynu ugu tallo galnay in aanay qabiil noqon in aanay gobol noqon Dastuurkeena ayay ku qeexan tahay, haddana gobollaysi iyo qabyaalad ayaynu u baddelay in reer hebel leeyihiin xisbigii, marka ka guurimayne, haddii aynu cod baahiyayaashana wax wanaagsan kaga haddalo ficilka xafiisyada iyo guryuhuna wax kale noqdaan bahashii waynu doonaynaaye aynu ku soo celino sideeni hore amar iyo is maqalka ahayd ee kala danbaynta ahayd, cumaamadahan faraha badanina marka meesha way ka bixi hadaynu qabyaaladii asalka ahayd ku noqono.”
Wasiir Sulub oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi. “Marka waxaan leeyahay 10 sanno wax yar ayaa ka hadhaye ha la sameeyo Xisbiyo cusub dadka iyo qaranka isku xidho.
Waxa aan sidaasi u leeyahay, anigu maanta KULMIYE ayaan ku jiraa, shalay WADDANI, tii ka soo horreysay waxaan ahaa aasaasayaashii Xisbigii UDUB.
Markii xisbigaygii UDUB oga burburayna ILlAAHAY ayaa silic i baday oo waa anigan kolba mid galaya, uma arko Xisbiyo hagaagsan oo UDUB oo kale ayaan daydayayaa.”